လိင် - စွဲစွဲလန်းလန်းသောနိုင်ငံရေးများ၏လုပ်ခ (၂၀၁၁) - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်က Porn On
အဘယ်ကြောင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများ၏ ဦး နှောက်၊ အစားအသောက်စွဲသူများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုလေ့လာခဲ့ရသနည်း၊ အထူးသဖြင့်လူတစ် ဦး သည်ထိုအဆိုကိုမကြာခဏကြားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်သိချင်ခဲ့သည် မရှိခြင်း လေ့လာမှု၏ "သက်သေပြ" ဖြစ်ပါတယ် porn စွဲ / လိင်စွဲလမ်း တစ်ဒဏ္ဍာရီ (client နှင့်လူနာတိုးနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ချိတ်ဆက်ခံရဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသည်သော်လည်း) ဖြစ်ပါသည်။
မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူ အဘယ်ကြောင့် porn နှင့်လိင်စွဲလမ်းအပေါ်ဦးနှောက်-သိပ္ပံသုတေသနလက်တွေ့လည်းမရှိခဲ့ချေသည်။ ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသမိုင်းကလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်မည်သည့်အခါမျှစွဲလမ်းမှုမဖြစ်စေရဟုအကျွမ်းတဝင်အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်း၏ရင်းမြစ်ကိုလည်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
1992 မှာတော့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာလူ့လိင်၏နက်ရှိုင်းနားလည်မှုစိတ်ဓာတ်သည့်ဆေးဝါး၏လယ်ပြင်ထဲမှာရာအရပျကိုယူ။ ဒါဝိဒ်သည်အီး Smith က MD, စွဲဆေးပညာ၏ American Society (၏အတိတ်သမ္မတအရASAM), ဆရာဝန်များတစ်ဦးထက်ပိုချက်ချင်းအန္တရာယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ်လိင်စွဲလမ်း၏အသိအမှတ်ပြုမှုကွာ bartered ။ Smith ကလမ်းဖြင့်, မတ်ေတာသညျ (1967) ၏နွေရာသီကာလအတွင်း San Francisco မှာအခမဲ့ Haight-Ashbury ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူစွဲလမ်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနောက်ကွယ်မှပလပ်စတစ်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအကြောင်းကိုဆေးပညာပညာပေးရန်နှင့်အစွဲလူနာကုသရန်အစဉ်အဆက်နှစ်ဦးစလုံးကတည်းကမဆုပ်အနစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ သူမြောက်မြားစွာစာအုပ်တွေနဲ့ဂျာနယ်ဆောင်းပါးရေးသားသူဖြစ်ပါသည်။
စမစ်၏အဆိုအရဒီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာမှာ Jess Browley နှင့်သူသည်အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းမှကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ်စားလှယ်များ၏အိမ် အသစ်တစ်ခုအထူး၏ထောက်ခံချက်၏ search အတွက်: စွဲဆေးပညာ။ AMA သည်အထူးပြုအသစ်ကိုသဘောတူရန်သဘောမတူကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာရသည် လိင်ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်မဟုတ်လျှင် ဖြစ်နိုင်သောစွဲများ၏စာရင်းကနေ။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ 'စွဲလမ်းမှု' ကိုဘတ်စ်ကားအောက်မှာပစ်ချလိုက်တယ်။
ထိုသို့ဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်သိပ္ပံပညာသို့မဟုတ်စမစ်၏ကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံပေါ်တွင်အခြေမခံပါ။ နှစ် ဦး စလုံးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်အခြေအနေအချို့တွင်စွဲလမ်းနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်ဟုအကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်သဘာဝဆုကျေးဇူးများအနက်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သောကြောင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ် (စွဲလမ်းမှုအားလုံး၏ထိုင်ခုံ) တွင်ပေါ်ပေါက်သည်။
အကြောင်းပြချက်မဟာဗျူဟာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆေးရွက်ကြီးထုတ်လုပ်သူများ၏လှည့်ဖျားမှုကိုထုတ်ပစ်ရန်ဆရာဝန်များကကြိုးစားသည်။ ဆေးရွက်ကြီးအကြီးကဆေးလိပ်သောက်တာကိုစွဲလမ်းစေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့အရာအားလုံးကိုရပ်တန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆေးစွဲသူများ၏သက်သေအထောက်အထားများကိုလျစ်လျူရှုသင့်ကြောင်း၊ အားလုံးပါပဲ စွဲလမ်းစေ။"
လိင်ဆရာဝန်များကြောင်းသရုပ်ပြဖယ်ထုတ်ပြီး မဟုတ်ကြဘူး အရာအားလုံးကိုစွဲလမ်းသည်။ ထို့အပြင်လိင်စွဲလမ်းသူများမှာရှားပါးသည်။ ဆေးလိပ်သောက်သူများသည်နေရာတကာတွင်ရှိပြီးမလိုအပ်သောခံစားချက်များလည်းရှိနေသည်။ ထို့အပြင်အမူအကျင့်စွဲ ဦး နှောက်သိပ္ပံပညာမရောက်ရှိသေးပါ ဒီနေ့အဆင့်တွေ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်နိဂုံးပိုင်း၏။
အဆိုပါစွဲလယ်ကွင်းထဲကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထွင်းထုအန္တရာယ်ထူပြောသောဂယက်ရိုက်ခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကပြီးနောက်နီးပါးဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု အဆိုပါမီးခိုးလည်ငွိမျးအဆိုပါထုတ်ဝေဆေးရွက်ကြီးစာတမ်းများနှင့်အတူစတင် အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဂျာနယ် (1994), ငါတို့လိင်နားလည်မှု၏အမှောင်ခေတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
neurobiologists: အဆိုပါ ASAM-AMA သဘောတူညီချက်အမှတ်တမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုလျှံအပေါ်အများဆုံးအလင်းသွန်းနိုင်သူအလွန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်များက၏စပ်စုမျက်စိကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကာကှယျ။ အဘယ်ကြောင့်အရာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Fiat အားဖြင့်တစ်ခုခုလေ့လာ, မတည်ရှိပါဘူး? ထို့ကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုလျှံ၏ neurobiology သို့နီးပါးမျှတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှိခဲ့သည်။ (မတူဘဲ, များစွာသောလေ့လာမှုတွေကတခြားအမူအကျင့်စွဲအတွက်တည်ရှိမှုစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအတည်ပြု။ )
အဲဒီအစား, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသန hyposexuality (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မရှိခြင်း) ရက်နေ့တွင်နီးပါးလုံးဝအာရုံစူးစိုက်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးပညာ-သတ်မှတ်ထားသော vibrators နှင့် erotica ရှိသည်။ ဆရာဝန်များပင်စမ်းသပ်နေကြသည် အော်ဂဇင်ထုတ်လုပ် implants အမျိုးသမီးကျောရိုးအဘို့။
သို့သျောလညျးလူနာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၏ညညျးညူသည်မှန်လျှင်, porn morphing အရသာ မငြိမ်နည်းလမ်းတွေ, ဒါမှမဟုတ်ထဲမှာ တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဘို့အလိုအပျ- ကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး က hypersexuality မရှိကြောင်းသူ့ကိုအာမခံလိမ့်မည်။ သူဟာတောင်မှမှန်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို- စွဲလမ်းသူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး ကသူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်ရေရာဂစိတ်ဖြေသည့်ယောက်ျားအားတစ်နေ့လျှင်ခြောက်နာရီအားသူ၌စွဲလမ်းမှုမရှိကြောင်းပြောခဲ့သည်ဟုဂုဏ်ယူစွာပြောကြားခဲ့သည်။ သီအိုရီအရဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊
သတ္တိရှိရှိကြောင်း hypersexuality ထောက်ပြသူကိုကုသ နိုင် စွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်အညီ clients များဆက်ဆံဖို့ကြိုးစား, ဖြစ်စေပယ်ချသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပိုပြီးတစ်ယူသန်ဆန်ရွယ်တူချင်းအားဖြင့်ရှက်ကြောက်နေကြသည်။ ဒီအတွေးအခေါ်တွေနဲ့အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌, လာမည့် DSM-5 ၏စာရေးဆရာများရည်ရွယ် hypersexuality ပေါ်တွင်အပိုင်းကိုဖယ်ထုတ် နောက်ဆက်တွဲရန်။ [မှတ်ချက် - DSM သည်အယူအဆကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြီးအပြုအမူစွဲလမ်းမှုအားဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်းနှင့်ထပ်မံလေ့လာရန်ခေါ်ဆိုခြင်းကိုကန့်သတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏“ မိဘ” ကိုထပ်မံလေ့လာရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုပင်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်း, (အရာသဘာဝကျကျအင်တာနက်စွဲလမ်းတဲ့မျိုးကွဲအဖြစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲထဲမှာမျောကြလိမ့်မယ်) ။ ]
ထိုသို့သောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရူပါရုံကိုအထက်ဆွေးနွေးသမိုင်းဝင်စာချုပ်ရန်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်စာအုပ်များ၏မျိုးဆက် (1) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုကျန်းမာလိင်မှအဓိကခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပြီး, (2) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမရနိုင်ကြောင်းဆိုပါတယ် အကွောငျး စွဲလမ်း။ ပညာရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသေးအမူအကျင့်စွဲအပေါ် highspeed အင်တာနက်နှင့်ဦးနှောက်သုတေသနများ၏အစွန်းရောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားမထားပါဘူး။
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပညာပါမောက္ခနှင့်လိင်သုတေသီများအားမေးမြန်းရာတွင်ဆီးချိုရောဂါပါရဂူများကအမိန့်ပေးသည့်အီတလီစစ်တမ်း၏သတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သူမည်သို့ထင်မြင်ကြောင်းမေးမြန်းခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံရှိဖိုရမ်များတွင်ရာပေါင်းများစွာသောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြထားသည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ, အရာ porn အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်၏လအတွင်းကိုယ်နှိုက်ကနောက်ကြောင်းပြန်။ သူ desensitization (တစ်ခုစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ) ဖြစ်စေတဲ့ porn ၏အလွန်အကျွံစားသုံးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုမထီမဲ့မြင်ပြု:
အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောရီစရာသတင်းပုံပြင်များဤခေါင်းစဉ်အပေါ်ထုတ်လုပ်ပြီးနေကြသနည်း Hmm ဟက်ဟက်က္ကူမွှားများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သောတည်ရှိမှုမရှိသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုကိုယ်စားပြုသလား။
မိမိအတုံ့ပြန်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်တွင်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်များကိုဘယ်တော့မျှဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည်ဟုမထင်ထားသည့်ယူဆချက်ကိုသူ၏ကျောင်းသားများသို့နှစ်ပေါင်းများစွာတူးဖော်ခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ ဤရာထူးကိုအမှန်တကယ် ဦး နှောက်သိပ္ပံပညာကမထောက်ခံသောကြောင့်စက်ဝိုင်းရှင်းလင်းချက်များမှာပုံမှန်ဖြစ်သည် -“ အင်တာနက် porn သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အလွန်အကံျွမဖြစ်နိုင် (လိင်သည်ဘယ်သောအခါမျှစွဲလမ်းမှုမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်)၊ အလွန်အကျွံ porn အသုံးပြုမှုကဲ့သို့သောအရာ။ "
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များကမကြာသေးမီကအသိပညာကွာဟမှုကိုပိတ်လိုက်တော့တယ်။ တွင် ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်, စိတ်ရောဂါ-Norman Doidge ဟာလျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်သူ၏မိုးသည်းထန်စွာ porn-သုံးပြီးလူနာအတွက်တုန့်ပြန် (နှင့်၎င်း၏ပြောင်းပြန်) နောက်ကွယ်မှဦးနှောက် plasticity အခြေခံမူကရှင်းပြခဲ့သည်. သို့သျောလညျးမှ neuroscience အထူးကုမဟုတ်သောအရှိဆုံးဆရာဝန်များနေဆဲပြန်၏သူတို့နေ့ရက်ကာလမှ hark Penthouse အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းသော extension တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်။ သူတို့ကဒီနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးသတိမထားမိကြဘူး ဝေး ပိုပြီးစွဲထုတ်လုပ် neurochemical ဆွ အတိတ်၏အငြိမ် porn ထက်ဦးနှောက်၏ကြောင်းဦးနှောက် Scan ဖတ်မှ အင်တာနက်ကိုစွဲ ပုံမှန်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုထုတ်ဖော်ပြသနေပြီဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်ယနေ့ကလေးများသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ porn များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေသည် ဦးနှောက်ထူးခြားပလပ်စတစ်များမှာ။ အဆုံးစွန်သောအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်စွဲဖို့အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ကြောင်းအကြံပြုပေးသောမကြာသေးမီကသုတေသနပြုနှောင့်ယှက်နေပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများစွာ၏ထုတ်ပယ်ခံရသောသဘောထားအပေါ် အခြေခံ၍“ လိင်သည်စွဲလမ်းမှုမဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်၊ လူတို့သည် orgasm အလုံအလောက်ရှိသည့်အချိန်တွင်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ ” တစ်ချိန်ကကျွမ်းကျင်သူများက၎င်းသည်အလွန်အရသာရှိသောအစားအစာများအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုယူဆခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အမေရိကန်များက၎င်းတို့အားမှားကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသောအစားအစာနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများအတွက်လူ့အာရုံကြောအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်များကိုပုံဖော်ထားသည်။ ဒီနေ့ superstimulating junk အစားအစာ အစဉ်အမြဲ-ဝတ္ထုဆိုက်ဘာ erotica ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောသဘာဝမွတ်မပြေနိုင်သောပရိုဂရမ်ထပ်ရေးဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြားယောင်းဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အော်ဂဇင်မလိုအပ်ပါ။ အော်ဂဇင်သည်ဆယ်စက္ကန့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာမကြာခဏစောင့်ကြည့်နေ နာရီပေါ်သွားသည်…တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်သည့်အလုပ်၊ ကျောင်းနှင့်အခြားနေရာများတွင်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်? ပုံမှန်အပျော်အပါးများကိုစွဲမက်ခြင်းမရှိသည့်စွဲလမ်းမှု၏အမှတ်အသားဖြစ်သောအမှိုက်ပုံးများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့စားသုံးနိုင်သည်။
အပေါ်ဤအတောအတွင်းသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသန အခြား အမူအကျင့်စှဲဝက်-လည်စည်းဆေးရွက်ကြီး lobbyists ကကူညီပေးခဲ့သောစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်အတားအဆီးမအပေါ်ချီတက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဝလွန်အဖြစ်လောင်းကစားများ၏ Scan ဖတ်နှင့်ဗီဒီယို-ဂိမ်းစွဲ၏ဦးနှောက် Scan ဖတ်, စစ်မှန်သောထုတ်ဖေါ် စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ.
ဤအစွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူပတျသကျသောရောဂါလက္ခဏာတွေအလွန်ရှိပါတယ် ဒီနေ့ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူအများစုမှာရောဂါလက္ခဏာတွေရှိနေတယ် များစွာသော: အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း, ပြင်းထန်မတရားသော, သည်းခံနေခြင်း (တင်းမာမှု), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်လျော့ကျလာ, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, စိတ်ကျရောဂါ, ခွဲထုတ်ဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အလိုဆန္ဒ, စိုးရိမ်စိတ်, ပြင်းထန် ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ ဒါကြောင့်ထွက်ဖြတ်နှင့်အပေါ်သို့။ သူတို့ထဲကအတော်များများလည်းထိုအကြောင်းသတင်းပို့ ရောဂါလက္ခဏာတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ reverse အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဖြတ်၏လအတွင်း။
ဤအတောအတွင်းသောအရာကိုတစ်ဦးလူနာလျှင်ဖြစ်ပျက် မပေးနိုင် Self-ဖျက်ဆီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေရပ်တန့်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုရှာတတ်၏? အမြားအပွားကိစ္စများတွင်လူနာအချို့နာမကျန်းထံမှခံရဖို့ယူဆနေသည် အခြား ထက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု။ ဒါအမှန်ပဲ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကရွေးပါ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ မူလတန်း, သို့မဟုတ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်, နာမကျန်းနှင့်အကြံပေးခြင်း, စိတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျသူ့ကိုရည်ညွှန်းသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုသည်အချို့သောအခြားအဓိကရောဂါတစ်ခု၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောယူဆချက်သည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်နပန်းလုံးသူများအားအထင်မှားစေသောရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရွေ့ကားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ADHD, OCD, စိတ်ကျရောဂါ, ပြင်းထန်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု (တ ဦး တည်းရဲ့လက်နှင့်အတူ?) ပါဝင်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာစွဲလမ်းနေသည့်လူနာသည်သူတတ်နိုင်သည်ကိုအကြောင်းကြားခြင်းမရှိပါ နောက်ပြန် ဆုတ်ခွာမွဲနှင့်အပြုအမူကိုပြောင်းလဲအားဖြင့်သူ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ။ ဦးနှောက် plasticity နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သုတေသီများလက္ခဏာများထိုကဲ့သို့သောအရာပေါ်သောအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းရာမှသိပါ အခြား diagnoses ကြွင်းသောအရာကိုမကြာခဏစွဲသူ့ဟာသူ (anhedonia, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်သောက, etc) ၏ function ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အပေါ်သို့ရယူ အခြား အစားစွဲ ပတ်သက်. client ကို / စိတ်ရှည်ပညာပေး၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမယ့်အစားချိုင်းထောက်၏ခြေထောက်နှင့်အသုံးပြုခြင်း၏ရွေ့မညွှန်ကြား၏နာကျင်မှုဆေးပြားယူကျိုးခြေထောက်နှင့်အတူလူနာပြောနေညီမျှသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, တချို့လူနာတွေကအမှန်တကယ်၏အစားတွင်ဤသည်အခြားရောဂါများနှင့်အခြေအနေများရှိသည်, သို့မဟုတ် Self-ဖျက်ဆီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အပြင်ပါဘူး။ သူတို့မကျင့်, နှင့်လိင်စွဲလမ်းကိုယ်နှိုက်လျှင်ဒါပေမယ့်ဆရာဝန်မကြာခဏအချက်ကိုလျစ်လျူရှု, သူတို့ရဲ့ဒုက္ခ၏ချုပ်အကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ S / သူလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည် မဟုတ် တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှမူလတန်းနာမကျန်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အပြုအမူစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။
Alas, အခြားစှဲမူလတန်းဖြစ်နိုငျသောယူဆချက်, ဒါပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အပြုအမူစွဲ, တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဘူး ဇီဝမဖြစ်နိုင်။ သာဆယ်စုနှစ်များစွာစွဲသုတေသန၏လယ်ပြင်ကနေလိင်ဖယ်ထုတ်ပြီးအားဖြင့်ငါတို့သည်မဟုတ်ရင်ယုံသို့ကိုယျ့ကိုယျကိုအရူးနိုင်ဘူး။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အခြားအခွအေနမြေား၏ရှေ့မှောက်တွင်တစ်ခုစွဲစေပါဘူး နည်းသော တစ် ဦး စွဲ၏။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသောအရက်သမားတစ် ဦး သည်အရက်စွဲခြင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်နေသေးပြီးအ ၀ လွန်သူတစ် ဦး သည်မသောက်ရသည့်အစားအစာများကိုကိုင်တွယ်ရန်ရှိနေသေးသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်သူတို့၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။
ယခုနှစ်သြဂုတ်လ (၂၀၁၁) တွင်ကြီးမားသောပင်လယ်ပြောင်းလဲမှုစတင်ခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစွဲလမ်းမှုအဖြစ်လိင်အပြုအမူများကိုချန်လှပ်ခြင်းကို AMA မှမဟုတ်ဘဲ ASAM မှတည့်မတ်ပေးခဲ့သည် မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောအများပြည်သူဆိုင်ရာကြေငြာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများတွင် ASAM က၊
အမူအကျင့်စွဲသုတေသနအတွက်တိုးတက်မှုများကြောင့်စွဲခြင်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့် neurobiologists သည်ယခုအခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲလမ်းမှုသည်အခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်အတူအဓိက ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချလာသည်။ အင်တာနက်စွဲဆောင်မှုတွင်တွေ့ရသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်အင်တာနက် porn / sex စွဲသူများသည်အမှန်တကယ်နှင့်ကိုက်ညီရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများအားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီအောင်ထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိုက်ရိုက်လမ်းပြနိုင်ရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများနှင့်မှားယွင်းစွာဖော်ထုတ်ထားသည့်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏တရားစွဲဆိုမှုများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်။
ASAM ၏ကြေငြာချက်သည်ကြီးမားသောရှေ့သို့တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လုပ်ရန်အသင့်ရှိနေသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာမျက်စိကန်းသူများ၏ကျေးဇူးကြောင့်သုတေသီများသည် ဦး နှောက်၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘာမှမသိသေးပါ ချိန်ခွင်လျှာ တူ, ဒါမှမဟုတ်အဘယ်ကြောင့်သာယာဝပြောရေးကိုအားပေးအားမြှောက်။ ပိုလျှံဘို့သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များရှိနေသော်လည်းသာမန်များနှင့်စွန့်စားမှု-အခမဲ့နှစ်ဦးစလုံးရစ်ကြောင်းအဆိုပါ meme ယောက်ျား, အမြိုးသမီးမြား နှင့် မြီးကောင်ပေါက်.
ဦး နှောက်သည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောအပြောင်းအလဲများကိုတီထွင်နေသည်ဟူသောလက္ခဏာများသည်မကြာမီဘုံအသိပညာဖြစ်လာနိုင်သည်။ သို့သော်သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ပိုမို၍ ပွင့်လင်းသောစိတ်များဖြင့် ဦး နှောက်အပေါ်လိင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာစဉ်တွင်၊ ဥပမာအားဖြင့်, ပိုလျှံနှင့်အတူဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများ, ပိုမိုပျော့ပုံစံများအတွက်ပင်, မိတ်ဖက်များအကြားလေ့မြန်ဆန်ခြင်းဖြင့်ရေရှည်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးပျော်မွေ့ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေပါသလား မိတ်ဖက်များ၏ ဦး နှောက်အပေါ်ပုံမှန်ပူးတွဲပါအချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ။
အော်ဂဇင်ကိုယ်နှိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်အချို့ကျွန်ုပ်တို့ပျောက်ဆုံးနေပါသလား။ ဥပမာအားဖြင့်, အော်ဂဇင်ပြီးနောက်ဟော်မုန်းနှင့်အာရုံကြောဓာတုဂယက်ထ၏သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်, နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။ Are အမျိုးသားများအတွက်, အမျိုးသမီးများရဲ့ နှင့် မြီးကောင်ပေါက်'' ဦး နှောက်ကဒီကိစ်စမှာကွဲပြားခြားနားတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုပြုလုပ်ပါ ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဦးနှောက်အပေါ်?
သမိုင်းအရ ASAM-AMA စာချုပ်ကမရည်ရွယ်ဘဲကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးပွားစေခဲ့တယ် -“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်းအပါအ ၀ င်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်လာရင်လိင်စွဲလမ်းမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အလွန်များများစားစား၊ ဤဆန္ဒရှိသောဤအတွေးကိုအမြစ်ဖြုတ်ရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးမှုကိုအပေါ်ယံပုံစံများဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်အနုတ်လက္ခဏာများ၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်းနှင့်အမိန့်ပေးခြင်း၊ လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျအားထုတ်ခြင်းကိုတားဆီးရန်မှာ“ လိင်အပြုသဘောဆောင်ခြင်း” မဟုတ်ပါ။ သုတေသနနုပျို ED အတွက်ကြီးမားမြင့်တက်အတည်ပြု.
အဲဒီအစားရှုတ်ချသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခုခံ၏ အပြုအမူ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်အစားအစာများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း (ဦး ထုပ်၊ ညစ်ညမ်းသောအကြောင်းအရာ၊ လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုစသည်တို့) ဦး နှောက်ဇီဝကမ္မဗေဒ - အာရုံကြောဓာတုဗေဒ၊ လက်ခံသူ၊ frontal cortex ပြောင်းလဲခြင်း၊ စွဲသုတေသန။
အခြားနိုင်ငံများ (အချို့နိုင်ငံများ၌ porn အသုံးပြုမှုအပါအဝင်) အင်တာနက်စွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးအလုပ်မှာခက်ခဲပြီးသားဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုမှာအုပ်စုတစ်စု သုတေသီများသည်မကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ 18 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ စကားမစပ်, ယောက်ျားအင်တာနက်စွဲလမ်း၏အန္တရာယ်အမျိုးသမီးများ၏အကြောင်းကိုသုံးကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကောက်ချက်ချ:
လူဦးရေအတွက်လူငယ်တစ်ဦးကအကြီးအရာခိုင်နှုန်းကအင်တာနက်စွဲလမ်း၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများခံစားနေကြရသည်။ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်စိတ်ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ OCD အဖြစ်အင်တာနက်စွဲ [ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုသတိပြုမိဖို့ကလိုအပ် စိုးရိမ်စိတ်, နှင့်စိတ်ကျရောဂါ] ။
ဇီဝကမ္မစကားပြော, ထူးခြားသော ပေးထားသောအပြုအမူ၏လိုလားသောသို့မဟုတ်မလိုလားသောနှင့်အတူဘာမှရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက် / ခန္ဓာကိုယ်မညီမျှမှု၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့လူများသည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမထိခိုက်စေဘဲလိင်နှိုးဆွမှုများစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ အခြားသူများကမလုပ်နိုင်ပါ၊ ထိုသို့သောအပြုအမူသည်သူတို့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော၊ အဲဒါတကယ်ရိုးရှင်းပါတယ်
အဲဒါမဟုတ်ဘူး ဘာ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိပ်ခန်းများ၊ ကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်စေ၊ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလပ်စတစ် ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏ ဦး နှောက်သည်ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုအလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ သူမသည်သူမ ပိုမို၍ လှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်အခြားသူကိုပြသရန်အတွက်ဖြစ်သည် စွဲ-related လက္ခဏာတွေထို့နောက်ထိုပြဿနာအပြုအမူအလွန်အကျွံဖြစ်ပါသည် သူမအတွက်။ သူမသည်လုပ်ရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်. ဒါကဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုကောင်းကောင်းမ metabolize လုပ်တဲ့လူနဲ့မတူဘူး။ သူသည်ကျန်းမာရေးအပေါ်အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရမည်။
သူကအဲဒီမှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှကြွလာသည့်အခါ is ကဲ့သို့သောအရာ အလွန်အကျွံနှင့်ကဲ့သို့သောအရာလည်းမရှိ ထူးခြားသော။ ကျနော်တို့ကနေတွက်ဆလို့မရပါဘူး မဆိုကိုယ်ကျင့်တရားကုဒ်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများကိုအစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုညွှန်ပြသောလေး CS ကိုသုံးပြီးတွက်ကူညီနိုင်သည်
တောင်းပန် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှတမှုနှင့်ပိုလျှံမှုအတွက်စွမ်းရည်ကိုလူသားများနားလည်ရန်မည်သည့်အခါမျှအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ လိင်မှုကိစ္စလွတ်လပ်ခွင့်ပါရမီရှင်သည်ပုလင်းထဲမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် hypersexuality ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို prudish လက်စားချေခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ ဦး နှောက်အပေါ်တွင်ခက်ခဲစွာကြည့်နိုင်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ကြွေးကြော်သံများကိုလိင်သုတေသနမှကြိုတင်ယူဆထားခြင်းများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးလူသားများ၏လိင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောပိုမိုပြည့်စုံသောနားလည်မှု၊ ၎င်း၏ဂုဏ်ကျက်သရေနှင့်အားနည်းချက်များကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝယ်ရှိကိရိယာအသစ်များကိုအသုံးပြုကြပါစို့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကန့်သတ်မှုကိုလေးစားနေချိန်မှာ သာ. ကွီးမွတျအသိပညာကျနော်တို့ကိုရှေးခယျြရလဒ်များအဘို့အခုတ်မောင်းဖို့လိင်ခစျြတဲ့သူကိုသူတို့အားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပါလိမ့်မယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အပြုအမူစွဲ၏ဘေး underplay ဆက်လက်၏အခြားရွေးချယ်စရာမင်ျဂလာများ၏မူလတန်းအကြောင်းမရှိ, unacknowledged ပိုဆိုးလာရင်အနေဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာ-အလယ်တန်းများအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်ဆေးဝါးများ၏ပင်လယ်ထဲမှာနစ်များအတွက်အန္တရာယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုရွက်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များကကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲလမ်းမှုသိပ္ပံကိုနားမလည်ခဲ့ကြသော်လည်းယခုတွင်စွဲလမ်းမှုမရှိခြင်းကိုလျစ်လျူရှုစရာအကြောင်းမရှိပါ။ — David David Smith, MD
Kinsey Institute မှအောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်၊
အောက်တိုဘာလ 6-8, 2016
အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်, Bloomington, Indiana ပြည်နယ်, အမေရိကန်
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း
အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ် Kinsey Institute က
ဒီနည်းကို Dynamic NEW VIEW စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး CAPSTONE သည့်စိတ်ကူးများနှင့်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ကျားမ, လိင်, အမျိုးသမီး, ကျန်းမာရေး, မီဒီယာနှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအတူတကွဆောင်ခဲ့ဦးမည် THE NEW VIEW စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး, လိင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်ဖို့နှင့်ရှေ့ဆက်လမ်းကို chart မှ 2000 ဖွဲ့စည်းတဲ့အောက်ခြေကွန်ယက်ကို.
ယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူထိခိုက် porn အသုံးပြုမှု? တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများအထဲက Check - 40 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် - သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၁၃၅ ခု၏ဤ ၂၀၁၆ meta-analysis ၏အကျဉ်းချုပ် - မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015.
ငါကအခြားအ ဦး တည်ချက်အတွက်ဝေးလွန်းလှည့်၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ ဤတိုင်းပြည်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာလက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်မျိုးဆက်ပွားခြင်းမဟုတ်သောမည်သည့်လိင်မှုမျိုးကိုမဆိုအပြစ်နှင့်ဆိုးခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထို့နောက်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေး” ဖြစ်လာသည်နှင့်လိင်လွတ်လပ်မှုသည်ပင်မစီးပွါးရေးကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်တိုင်တိုင် Flash ကို Woodstock ၌ရွှံ့နွံထဲနစ်မြုပ်စေခဲ့သည့်မိဘများ၊ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ လိင်လွတ်လပ်ခွင့်သည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏ကလေးများဖြစ်သော Johnny နှင့် Lisa တို့သည် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုစတင်ခဲ့ကြပြီးဂျွန်နီ pees နှင့် Lisa သည်သူမ၏မြေနိမ့်ပိုင်းဒေသများတွင်ကြွက်နို့များပေါက်သည့်အခါလောင်ကျွမ်းသွားသည်။ (ဖြောင့် / ပုံမှန်) ပုံမှန်အတိုင်းအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီသည်အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါနှင့် ပက်သက်၍ စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်နေသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလိင်ကိစ္စအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်တိုးမြှင့်လာသည်။ ဤအချိန်တွင်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ” သည် Playboy ထက်အနည်းငယ်သာပိုသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာကေဘယ်လ်ကြိုးများရှိ softcore ပစ္စည်းများဖြစ်သော်လည်းယောက်ျားအများစုအတွက်ထိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသင်၏ VCR JUST THE RIGHT TIME တွင်ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။ !! ဒီစာရိုက်နေတုန်းပဲစဉ်းစား) ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အလွန်အရေးကြီးသောတရားရုံးချုပ်၏စီရင်ချက်အပြီးတွင်အဓမ္မပြုကျင့်မှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောအရာသို့မဟုတ်တစ်ခုခုမှလွဲလျှင်ပထမပြင်ဆင်ချက်မှလုံးဝကာကွယ်ပေးသည်။ ယခုတွင်သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမုန်းတီးသူများရှိလာသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို“ အမေရိကန် - အမေရိကန်” / ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုအဖြစ်မကျူးလွန်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုကြည့်ပြီး“ မင်းပြောတာကိုမင်းမကြိုက်ဘူး၊ မင်းရဲ့သေတမ်းစာကိုမင်းရဲ့ကာကွယ်ခွင့်ကိုငါအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မယ်” ကိုယူသည်။ / ဖိနှိပ် / တုံ့ပြန်မှု။ ငရဲ၊ အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများပင်လျှင် porn သည်အမျိုးသမီးများနှင့် (နှင့် pornstars) အတွက်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်ဟုစတင်ပြောဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းအထိမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်က Johnny နှင့် Lisa သည်မြန်ဆန်သောအင်တာနက်သုံးနိုင်သော nanosecond တွင်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော fetish နှင့် philia တိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အချိန်ဖြစ်သည် (အိုး၊ …ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ပုံတစ်ပုံအတွက် ၅ မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းထားပါသတိရပါ) ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်လောက်မှာသူရေးထားတာကငါ့ဆီပြန်လာပြီ။ ) ငရဲ၊ ဒီနေ့အလယ်အလတ်ကျောင်းအများစုဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းစက်ကိရိယာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတည်ရှိပြီးဖြစ်သောဖျားနာနေသောလိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုတိုင်းကိုရယူနိုင်ကြသည် သူတို့ fuck ဆိုတဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ fit နိုငျကွောငျး.
"ကောင်းသော" ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးမှားသွားပြီ။ လေဟာနယ်ထဲတွင်ရှိသောတည်ရှိမှုသည်လက်တွေ့လောက၌အမြဲတမ်းအဓိပ္ပာယ်မရှိသောကြောင့်နည်းပညာသည်အရာရာကိုပြောင်းလဲစေသည်။ လူများသည်အရာဝတ္ထုများကိုနွားများမှစတင်ယုံကြည်လာကြသည်။ ဆရာဝန်များသည်မှားကြောင်းဝန်ခံခြင်းကိုမုန်း။ အမှန်တရားကိုနင်းပြီးကန်ထဲဆွဲငင်သည်အထိဆန့်ကျင်သောသက်သေအထောက်အထားများကိုခုခံတွန်းလှန်ကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုမဖော်ပြရန်မှာအမေရိကန်၏အကြီးမားဆုံးတင်ပို့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအရပ်၌သင်ကရှိသည်။ စိတ်မကောင်းပါဘူးဤမျှကာလပတ်လုံး winded ခံရဖို့ပေမယ့်သင့်ရဲ့ post ကိုငါ့ကိုစဉ်းစားတယ်,